नझुक्किनुस प्रधानमन्त्री देउवा नै हुन, विमानको पाइलट बस्ने सिटमा आखिर के गर्दैछन् देउवा ? « Postpati – News For All
नझुक्किनुस प्रधानमन्त्री देउवा नै हुन, विमानको पाइलट बस्ने सिटमा आखिर के गर्दैछन् देउवा ?
काठमाडौं । कालो टोपी, तिलचाम्रे कपाल, काँधमा फूलका केस्रा, जहाजको ककपिटमा बसेका उनी हुन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा । तीनै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक गराएर राजनीतिक संक्रमणलाई सफल अवतरण गराएका देउवाको यो तस्बिर हेर्दा जोकसैलाई जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ । विमानको पाइलट बस्ने सिटमा आखिर के गर्दैछन् प्रधानमन्त्री देउवा ?